Fifaninanan-kira : lasan’ny « Kopi Kolé » Tahiry ny loka | NewsMada
Fifaninanan-kira : lasan’ny « Kopi Kolé » Tahiry ny loka
Ela niandrasana ! Tontosa, omaly tetsy amin’ny Coliseum Antsonjombe, ny dingan’ny famaranana amin’ny fifaninanan-kira « Kopi Kolé » sy « Découverte Madagascar », karakarain’ny fahitalavitra TV Plus Madagascar. Nambabo ny fon’ny mpitsara sy ny mpankafy ny fahaizan’ny Kopi Kolé Tahiry naka tahaka ity mpanakanto ity. Izy, araka izany, no nandrombaka ny loka goavana.
Teo amin’ny sokajy « Découverte » kosa, niavaka ary naharesy lahatra ny mpitsara sy ny mpankafy mozika ny kanto miavaka nentin’i Tsilira. Eo amin’ny « coup de cœur », amin’ny sokajy « Kopi Kolé », nandrombaka izany ny Kopi Kolé Elidiot, « Coup de cœur » eo amin’ny sokajy « Découverte » kosa i Jackie Randria.
Tsara ny manamarika fa ity no seho lehibe voalohany notanterahina teto an-dRenivohitra, taorian’ny nanafoanan’ny fanjakana ny fandrarana ny famoriam-bahoaka noho ny pesta. Tsy hisy ihany koa ny fifaninanana, amin’ny herintaona, araka ny tompon’andraikitra voalohany amin’ny fikarakarana izany.